Ka hadalka waxqabadka ballet TUTU gogosha - Warka - Shenzhen Wudongfang Dhaqanka Isgaarsiinta Co., Ltd.
Hoyga > Wararka > Wararka shirkadda > Ka hadalka waxqabadka balastarka TUTU goonnada
Ballet TUTU goonnadawaa dharka qoob-ka-ciyaarka ugu caansan ee baleedka caadiga ah, oo laga soo dheegtay gogosha baleedka ee Louis XIV. TUTU waxay ka samaysan tahay dun adag oo qaas ah waxayna u egtahay canjeel. Waa bilic ahaan isu eg oo isu eg.
Waxaa lagu gartaa goonno aad u gaaban, oo aan ka badnayn dhererka jilibka, oo wuxuu ka fidsan yahay dhexda. Waa qaab-gaaban oo leh xariir dhowr lakab ah maro. Guud ahaan, lix ama in kabadan oo dun ah ayaa loo isticmaalaa, kuwaas oo lakabyo leh.
Marka laga eego aragtida jilaa, goonnada TUTU waa mid aad ugu adag jilayaasha. Sababta oo ah dhexda, ku dhowaad saddex-meelood meel lugaha ayaa dhammaantood la soo bandhigaa, ma jiro wax qarsoon, si ay dhagaystayaashu u qadariyaan qoob-ka-ciyaarka dhaqdhaqaaqa lugta leh ee quruxda badan iyo qaabka lugta leh ee quruxda badan, taas oo macnaheedu yahay in aan la oggolaan atariishada. Qaabka lugta iyo dhaq-dhaqaaqa ayaa xoogaa jilicsan, taas oo ah naxariisdarro baleedka.
Atariishooyinka, marwalba suurtagal maaha in la xidho goonno qaali ah oo TUTU ah. Inta lagu jiro tababbarka, waxay yeelan doonaan goonno TUTU oo leh dun yar, iyo lebis jimicsi oo joogto ah oo loogu talagalay ku celcelinta maalinlaha ah.
Intaa waxaa dheer, TUTU ee waxqabadka badanaa waxay leedahay surwaal u dhigma dusha sare iyo hoose oo si toos ah ugu xiran. Waa inaan ku dhaarto halkan in ballerina uu xirto goono TUTU ah inta lagu gudajiro waxqabadka. Saraawiisha loo yaqaan daahfurka ayaa runtii qayb ka ah dharka qoob-ka-ciyaarka.
Si kastaba ha noqotee, shaqada ka dhigtay TUTU meesha allabariga iyo xagga sareba waa tan ugu caansan "Swan Lake", oo xitaa markay dadku dhahaan ballet, waxay ka fikiri doonaan qulqulatada cad ee goonnada TUTU cad ee cad iyo madow ee dhalaalaya madow Goonnada TUTU dhoobada
Hore:Saameynta dharka baleedka ee isbeddelka moodada hadda
Xiga:Heerka dharka baletiga